Tranolain'i Teepee "Zava-mavokely" - Moi Mili
Home > Tranolain'i Teepee "joko mavokely"
Tranolain'i Teepee "joko mavokely"
Teepee tany am-boalohany miaraka amin'ny dantelina Moimili "Pink spell" dia modely tena kanto ho an'ireo tia mavokely mavokely. Nozairina tanteraka avy amin ny lamba landy matevina. Izy io dia hamita ny efitranon'ilay zazavavy manana toerana manokana ho an'ireo pranks isan-karazany.
Lamba: 100% Cana misy fanamarinana OEKO-TEX®. 260 lanja.
Fitaovana: landihazo, landihazo madio, hazo, voajanahary, eko, lamba landy, hazo mafy, canvas
Default Title - PLN 320.00 PLN